အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာ ထီထိုးသလိုပါပဲဆိုပြီး အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေကို ပြောပြခဲ့တဲ့ စမိုင်းလ် – Suehninsi
စမိုင်းလ်ကတော့ တစ်ခေတ်တစ်ခါက အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ပါဝင်တဲ့ ဇာတ်ကားတိုင်းမှာ အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာအလုပ်တွေကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိနေခဲ့တဲ့ သူမကတော့ ကြည်နူးစရာကောင်းလွန်းတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ဖန်တီးတည်ဆောက်ထားနိုင်သူလေးဖြစ်ပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သမီးလေးနှစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမတို့ မိသားစုလေးကတော့ အလှူအတန်းတွေမှာ လက်မနှေးဘဲ လှူတန်းတတ်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို အပြည့်အဝရရှိထားသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ မကြာခဏဆိုသလို အလှူအတန်းတွေ ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေကိုလည်း ကိုယ်တိုင်လုပ်လေ့ရှိသူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအင်တာဗျူးလေးမှာတော့ သရုပ်ဆောင်စမိုင်းလ်က အိမ်ထောင်ပြုတယ်ဆိုတာ ထီထိုးသလိုပါပဲဆိုပြီး သူမရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေနဲ့ အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့ပုံကို ရင်ဖွင့်ပြောပြခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ပထမဦးစွာ စမိုင်းလ်က သူမက အိမ်ထောင်ရေး ကံကောင်းသူလား? ဆိုတဲ့ မေးခွန်းနဲ့စပ်လျဉ်းပြီး အောက်ပါအတိုင်းဖြေကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ “ပွင့်ပွင့်လင်းလင်စပြောရမယ်ဆို ယောက်ျားတွေက ဆင်းရဲတဲ့ဒဏ်ကို ခံနိုင်တယ်၊ ချမ်းသာတဲ့ဒဏ်ကို မခံနိုင်ဘူး။ မိန်းမတွေကကျတော့ ဆင်းရဲတဲ့ဒဏ်ကို မခံနိုင်ဘူး၊ ချမ်သားတဲ့ဒဏ်ကို ခံနိုင်တယ်တဲ့။ စကားပုံလေး ရှိတာပေါ့နော်။ အဲ့တော့ ယောက်ျားတွေက သူအဆင်ပြေလာပြီ ဆိုလိုရှိရင် အဖျက်တွေက အများကြီးရှိတယ်။ ဘာကိစ္စမဆို ဖြစ်နိုင်တာ အများကြီးရှိတာပေါ့နော်​။ အဲ့တော့ အကိုကတော့ အခုချိန်ထိ အမနောက်တစ်ကောက်ကောက် လိုက်ပြီးတော့ ချစ်ခင်ပေးနေတဲ့အတွက် အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း ကံကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်လို့ ယူဆတယ်ပေါ့နော်။ ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ အိမ်ထောင်တစ်ခုပြုတယ်ဆိုတာ ထီထိုးသလိုပဲ ပေါ့နော်။ ယောက်ျားက ဘယ်လောက်ပဲ ကောင်းနေကောင်းနေ၊ ကိုယ့်လက်ထဲရောက်သွားရင် ဆိုးသွားတာလည်း ရှိတယ်။ အရင်တုန်းက ဘယ်လောက်ပဲ မကောင်းခဲ့မကောင်းခဲ့၊ ကိုယ့်လက်ထဲမှာ ကောင်းသွားတာလည်း ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်နဲ့ကောင်းနေရင်းနဲ့ပဲ ထဖောက်သွားတာလည်း ရှိပြန်ရော ဆိုတော့ ဒါကလေ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကံနဲ့ အများကြီးသက်ဆိုင်နေတယ်လို့ ထင်တယ်။ ကိုယ်ကတော့ ကံကောင်းနေသေးတယ်လို့ပဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယူဆပါတယ်။”
ယခုအိမ်ထောင်ဖက်ကို ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့ပုံနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့လည်း စမိုင်းက အောက်ပါအတိုင်း ရှင်းပြခဲ့ပါသေးတယ်။ “နောက်တစ်ခုကကျတော့ သူက အမရဲ့မိဘအပေါ်ကို respect ထားတာပေါ့နော်။ အမရဲ့ အမေနဲ့အဖေနဲ့ကို သူကလေ စတွေ့တည်းက လေးလေးစားစားဆက်ဆံတော့ ကိုယ်နဲ့ပေါင်းရသလို ကိုယ့်မိသားစုနဲ့လည်း ပေါင်းရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အကိုက တော်တော်ကို အမမိဘကို အရေးပေးတဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ အဲ့တာကိုအဓိကထားပြီးတော့လည်း ရွေးချယ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။”
စမိုင်းအနေနဲ့ မိဘနဲ့ တကွဲတပြားမှာ သွားရောက်နေထိုင်ခဲ့ရစဉ်က အခက်အခဲလေးတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းလောကထဲကို စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပုံကိုလည်း အောက်ပါအတိုင်း ချိတ်ဆက်ပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။ “အမက အိမ်နဲ့ခွဲရတဲ့အခါကျတော့ မိန်းကလေးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ အိမ်ကို ဖုန်းဆက်ချင်တာပေါ့နော်။ ဖုန်းခကလည်း မတတ်နိုင်ဘူး။ ပြီးတော့ ဒီဖုန်းလိုင်းတွေကလည်း အဲ့ခေတ်ကမပေါ်ဘူး။ ဗမာပြည်ကနေ ဆက်ဖို့လည်း မရှိဘူးလေ။ အဲ့လိုမျိုး အရမ်းခက်ခဲတဲ့အခါကျတော့ အမက ညတိုင်းငိုပြီးတော့ အကို့ကို ပြောတာပေါ့နော်​။ ကိုယ့်ဖုန်းကဒ်လေး ကိုယ်ရှိရင်ကောင်းမယ်၊ အဲ့တာဆို အကြွေးတွေလည်း မပိတော့ဘူးပေါ့နော်။ အမတို့က သူများဆီကနေ ဖုန်းကဒ်တွေဝယ်ပြီးတော့ သုံးရတာဆိုတော့လေ ပိုက်ဆံတွေကုန်တော့ အကို့ကို ကိုယ့်ဖုန်းကဒ်လေး ကိုယ်ထုတ်ပါလား ပေါ့နော်။ ဗမာပြည်ကိုခေါ်တဲ့ ဖုန်းကဒ်လေး ဆိုပြီးတော့၊ အဲ့ကနေစပြီးတော့ အမတို့က Telecom လုပ်ငန်းကို စပြီးတော့ ဝင်ရောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ကြောင့်လို့ ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။ အဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့။ အိမ်နဲ့လည်း အရမ်းစကားပြောချင်တယ်၊ ပိုက်ဆံလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ အကိုကလည်း ဒီ Telecomm နဲ့ လုံးဝမသိတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် အမတို့က ဒုက္ခ​တွေရောက်၊ ဆင်းရဲနေတဲ့အချိန်မှာ ဒီ ဖုန်းကဒ်လေးတွေကို သူများဆီကနေ တစ်ဆင့်ယူရောင်းကြည့်ရင်းကနေ ဒီ Telecom လုပ်ငန်းလေးကို စိတ်ပါသွားတာပါ​။ အဲ့တုန်းက ပိုက်ဆံကလည်း လုံးဝမရှိတော့ဘူးလေ၊ အိမ်နဲ့ကလည်း ဖုန်းပြောရတယ်ဆိုတော့ အမကလည်း အကို့ကို ဂျီကျရင်းနဲ့ လုပ်ဖြစ်သွားတာပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ကဘယ်လောက်ပြောပြော သူကလုပ်မှဖြစ်တာဆိုတော့ အဓိကက သူတော်လို့ပါ။”
သူတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့ ယခင်ကာလ အဝေးတစ်နေရာမှာ ငတ်တစ်လှည့်၊ ပြတ်တစ်လှည့် အတူတူရုန်းကန်ဖြစ်ခဲ့ပုံကိုလည်း အခုလို ဝေမျှပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ “အဓိကကတော့ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့ အတူတူရှိနေတာပေါ့နော်၊ ငတ်ငတ်ပြတ်ပြတ်ပေါ့။ ပြီးတော့ အမထင်တယ်၊ အသက်ငယ်တာကြောင့်လည်း ဆိုင်တယ်​။ အသက်ငယ်တဲ့အခါကျတော့ ပြောရမယ်ဆိုရင် မိုက်ရူးရဲဆန်တယ် ပေါ့နော်။ အခု အမ အသက်(၃၀)ကျော်ပြီ၊ ငတ်မလားဆိုရင် အငတ်မခံနိုင်တော့ဘူး၊ အဲ့လိုမျိုးလေ။ အဲ့လိုမျိုး ကြောက်သွားပြီလေ။ ငယ်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ ဘာမှမစဉ်းစားဘူး။ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့လည်း ရှိနေတဲ့အခါကျတော့ ငတ်လည်းနေ၊ ဘတ်စ်ကားဆိုလည်း တစ်နေကုန် ပတ်စီးတာပဲ။ မနက်နဲ့ညနဲ့ ပေါင်းစား ဆိုရင်လည်း မနက်နဲ့ညနဲ့ ပေါင်းစားတယ်။ ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ ဗိုက်မဆာဘူးလား ဆိုရင်တော့ ဆာတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ရက်မစားရလို့လည်း မသေသွားဘူးလေ၊ အဲ့လိုနေနိုင်တာ။ အခုများကျတော့ မရတော့ဘူး။ အသက်ကြီးသွားတော့ အားလုံးတွေးသွားပြီ။ ငယ်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ မိုက်ရူးရဲဆန်တာ ပေါ့နော်။”
သူမရဲ့ အခုလက်ရှိ မိသားစုဘဝလေးနဲ့ ပတ်သတ်လို့လည်း စမိုင်းက အောက်ပါအတိုင်း ဝေမျှလာပါတယ်။ “အမဆိုရင် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ အဖေနဲ့အမေကို ထားနိုင်နေပြီ။ ဒါပေမယ့် အဖေ၊ အမေ မရှိဘူး။ ဒါပေမယ့် အကို့ရဲ့မိဘတွေ ရှိသေးတယ်၊ အမရဲ့အဘွား ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်။ အဘွားကိုဆိုရင် ပြုစုနိုင်တယ်။ အမအဘွားက အခုချိန်ထိ ကျန်းကျန်းမာမာရှိနေသေးတယ်။ အဲ့တော့ ကိုယ်က သူ့ကို ပြုစုနိုင်ပြီးတော့ အေးအေးချမ်းချမ်းထားနိုင်တာကလည်း ကုသိုလ်တစ်မျိုးပဲလို့ ထင်ပါတယ်။ အဲ့တော့ အဘွားကို ချစ်ပေးတဲ့သူ၊ အမတို့ မိသားစုအကုန်လုံးကို ချစ်ပေးတဲ့သူတွေအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့။ အလှူတွေကိုလည်း လုပ်နေတယ်ဆိုတာကလေ ကိုယ်က နိုင်သလောက်လေးပဲ ပေါ့နော်။ အမအနေနဲ့ ဒီထက်လည်း အများကြီးလှူချင်သေးတယ်။ ဒီထက်လည်း အများကြီး လူတွေကို ကယ်တင်ချင်သေးတယ်။ နောက်ထပ် အစီအစဉ်တွေလည်း အများကြီးရှိသေးတယ်။ အဲ့တော့ အားပေးပါလို့ ပြောချင်တယ်။ အမရဲ့ အွန်လိုင်းရုပ်ရှင်ရုံ App လေးကိုလည်း ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပြီးတော့ကြည့်ထားကြပါ။ အဲ့ဒီ App လေးထဲကနေလူတွေကို Surprise အနေနဲ့ ဘယ်လောက်ထိလှူသွားမလဲဆိုတာလည်း အများကြီးရှိသေးတယ်။ အဲ့တာတွေလည်း လာဦးမှာမိုလို့ App လေးကို ဒေါင်းလုပ် လုပ်ပြီးတော့ ကြည့်ထားကြပါ လို့ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။”
Smile အွန်လိုင်းရုပ်ရှင်ရုံလေးဟာဆိုရင်လည်း ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ မွေးနေ့မှာ Launch လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး မထင်မှတ်ထားလောက်အောင်ကို လူတွေက ကြည့်ကြတဲ့အတွက် စမိုင်းလ်က ကျေးဇူးတင်စကားဆိုထားပါတယ်​။ အခုအချိန်ကာလမှာ နယ်ဘက်ကျေးဘက်တွေမှာလည်း ရုပ်ရှင်ရုံမရှိတဲ့အတွက် ဒီ App လေးကို ပိုပြီးတော့ သုံးစွဲကြည့်ရှုသူ များပြားနေပြီး ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကျရောက်လာတာဟာ (၆)လ၊ (၇)လမျှ ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် လူတွေကလည်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအသစ်ကို မျှော်နေချိန်မှာ ဒီလို Launch လုပ်ပေးဖြစ်တာဟာ မှန်ကန်တဲ့ Timing ဖြစ်တယ်လို့ စမိုင်းလ်က ဆိုပါတယ်။ စမိုင်းရဲ့ အွန်လိုင်းရုပ်ရှင်ရုံ App ဟာဆိုရင် iOS version အနေနဲ့လည်း ထွက်ရှိတော့မှာဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ဇာတ်ကားတွေအများကြီး တင်သွားဖို့ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးတို့ရေ ဒီအင်တာဗျူးလေးမှာတော့ ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်စမိုင်းလ်က သူမရဲ့ ငယ်စဉ်အိမ်ထောင်ရေးဘဝနဲ့ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများကို မျှဝေပေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး အရင်လက သူမတို့ မိတ်ဆက်ထားတဲ့ Smile အွန်လိုင်းရုပ်ရှင်ရုံ App လေးကိုလည်း အားပေးကြည့်ရှုကြပါဦးလို့ ပရိသတ်အားလုံးကို တိုက်တွန်းခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စမိုင်းလ်ရဲ့ အခုလိုဖြေကြားချက်များနဲ့ ပတ်သတ်လို့ ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ အမြင်လေးတွေကိုလည်း ဝေမျှပေးခဲ့ကြပါအုံးနော်။ အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်း အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
စမိုငျးလျကတော့ တဈခတျေတဈခါက အောငျမွငျခဲ့တဲ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျဖွဈပွီး ပါဝငျတဲ့ ဇာတျကားတိုငျးမှာ အကောငျးဆုံးသရုပျဆောငျနိုငျခဲ့တဲ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ အနုပညာအလုပျတှကေို ဆကျလကျလုပျကိုငျလကျြရှိနခေဲ့တဲ့ သူမကတော့ ကွညျနူးစရာကောငျးလှနျးတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ဖနျတီးတညျဆောကျထားနိုငျသူလေးဖွဈပွီး ခဈြစရာကောငျးတဲ့ သမီးလေးနှဈယောကျကို ပိုငျဆိုငျထားနိုငျခဲ့တဲ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ သူမတို့ မိသားစုလေးကတော့ အလှူအတနျးတှမှော လကျမနှေးဘဲ လှူတနျးတတျတာကွောငျ့ ပရိသတျတှရေဲ့ ခဈြခငျအားပေးမှုကို အပွညျ့အဝရရှိထားသူတှပေဲဖွဈပါတယျ။ မကွာခဏဆိုသလို အလှူအတနျးတှေ ပရဟိတလုပျငနျးတှကေိုလညျး ကိုယျတိုငျလုပျလရှေိ့သူလေးလညျးဖွဈပါတယျ။
ဒီအငျတာဗြူးလေးမှာတော့ သရုပျဆောငျစမိုငျးလျက အိမျထောငျပွုတယျဆိုတာ ထီထိုးသလိုပါပဲဆိုပွီး သူမရဲ့ အိမျထောငျရေးအခွအေနနေဲ့ အိမျထောငျဖကျရှေးခယျြဖွဈခဲ့ပုံကို ရငျဖှငျ့ပွောပွခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ပထမဦးစှာ စမိုငျးလျက သူမက အိမျထောငျရေး ကံကောငျးသူလား? ဆိုတဲ့ မေးခှနျးနဲ့စပျလဉျြးပွီး အောကျပါအတိုငျးဖွကွေားပေးခဲ့ပါတယျ။ “ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျစပွောရမယျဆို ယောကျြားတှကေ ဆငျးရဲတဲ့ဒဏျကို ခံနိုငျတယျ၊ ခမျြးသာတဲ့ဒဏျကို မခံနိုငျဘူး။ မိနျးမတှကေကတြော့ ဆငျးရဲတဲ့ဒဏျကို မခံနိုငျဘူး၊ ခမျြသားတဲ့ဒဏျကို ခံနိုငျတယျတဲ့။ စကားပုံလေး ရှိတာပေါ့နျော။ အဲ့တော့ ယောကျြားတှကေ သူအဆငျပွလောပွီ ဆိုလိုရှိရငျ အဖကျြတှကေ အမြားကွီးရှိတယျ။ ဘာကိစ်စမဆို ဖွဈနိုငျတာ အမြားကွီးရှိတာပေါ့နျော။ အဲ့တော့ အကိုကတော့ အခုခြိနျထိ အမနောကျတဈကောကျကောကျ လိုကျပွီးတော့ ခဈြခငျပေးနတေဲ့အတှကျ အမြားကွီးကြေးဇူးတငျတယျ။ ပွီးတော့ ကိုယျ့ကိုယျကိုလညျး ကံကောငျးတဲ့ထဲမှာပါတယျလို့ ယူဆတယျပေါ့နျော။ ဘာဖွဈလို့လညျးဆိုတော့ အိမျထောငျတဈခုပွုတယျဆိုတာ ထီထိုးသလိုပဲ ပေါ့နျော။ ယောကျြားက ဘယျလောကျပဲ ကောငျးနကေောငျးနေ၊ ကိုယျ့လကျထဲရောကျသှားရငျ ဆိုးသှားတာလညျး ရှိတယျ။ အရငျတုနျးက ဘယျလောကျပဲ မကောငျးခဲ့မကောငျးခဲ့၊ ကိုယျ့လကျထဲမှာ ကောငျးသှားတာလညျး ရှိတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကိုယျနဲ့ကောငျးနရေငျးနဲ့ပဲ ထဖောကျသှားတာလညျး ရှိပွနျရော ဆိုတော့ ဒါကလေ လူတဈယောကျရဲ့ ကံနဲ့ အမြားကွီးသကျဆိုငျနတေယျလို့ ထငျတယျ။ ကိုယျကတော့ ကံကောငျးနသေေးတယျလို့ပဲ ကိုယျ့ကိုယျကို ယူဆပါတယျ။”
ယခုအိမျထောငျဖကျကို ရှေးခယျြဖွဈခဲ့ပုံနဲ့ ပတျသတျပွီးတော့လညျး စမိုငျးက အောကျပါအတိုငျး ရှငျးပွခဲ့ပါသေးတယျ။ “နောကျတဈခုကကတြော့ သူက အမရဲ့မိဘအပျေါကို respect ထားတာပေါ့နျော။ အမရဲ့ အမနေဲ့အဖနေဲ့ကို သူကလေ စတှတေ့ညျးက လေးလေးစားစားဆကျဆံတော့ ကိုယျနဲ့ပေါငျးရသလို ကိုယျ့မိသားစုနဲ့လညျး ပေါငျးရမှာ ဖွဈတဲ့အတှကျ အကိုက တျောတျောကို အမမိဘကို အရေးပေးတဲ့ ယောကျြားတဈယောကျဖွဈတဲ့အတှကျကွောငျ့မို့လို့ အဲ့တာကိုအဓိကထားပွီးတော့လညျး ရှေးခယျြဖွဈခဲ့တာပါ။”
စမိုငျးအနနေဲ့ မိဘနဲ့ တကှဲတပွားမှာ သှားရောကျနထေိုငျခဲ့ရစဉျက အခကျအခဲလေးတှနေဲ့ ဆကျသှယျရေးလုပျငနျးလောကထဲကို စတငျဝငျရောကျခဲ့ပုံကိုလညျး အောကျပါအတိုငျး ခြိတျဆကျပွောပွခဲ့ပါသေးတယျ။ “အမက အိမျနဲ့ခှဲရတဲ့အခါကတြော့ မိနျးကလေးဖွဈတဲ့အခါကတြော့ အိမျကို ဖုနျးဆကျခငျြတာပေါ့နျော။ ဖုနျးခကလညျး မတတျနိုငျဘူး။ ပွီးတော့ ဒီဖုနျးလိုငျးတှကေလညျး အဲ့ခတျေကမပျေါဘူး။ ဗမာပွညျကနေ ဆကျဖို့လညျး မရှိဘူးလေ။ အဲ့လိုမြိုး အရမျးခကျခဲတဲ့အခါကတြော့ အမက ညတိုငျးငိုပွီးတော့ အကို့ကို ပွောတာပေါ့နျော။ ကိုယျ့ဖုနျးကဒျလေး ကိုယျရှိရငျကောငျးမယျ၊ အဲ့တာဆို အကွှေးတှလေညျး မပိတော့ဘူးပေါ့နျော။ အမတို့က သူမြားဆီကနေ ဖုနျးကဒျတှဝေယျပွီးတော့ သုံးရတာဆိုတော့လေ ပိုကျဆံတှကေုနျတော့ အကို့ကို ကိုယျ့ဖုနျးကဒျလေး ကိုယျထုတျပါလား ပေါ့နျော။ ဗမာပွညျကိုချေါတဲ့ ဖုနျးကဒျလေး ဆိုပွီးတော့၊ အဲ့ကနစေပွီးတော့ အမတို့က Telecom လုပျငနျးကို စပွီးတော့ ဝငျရောကျဖွဈသှားတာပေါ့နျော။ ပွောရမယျဆိုရငျတော့ ကိုယျ့ကွောငျ့လို့ ပွောလို့ရတာပေါ့နျော။ အဲ့ဒီလိုမြိုးပေါ့။ အိမျနဲ့လညျး အရမျးစကားပွောခငျြတယျ၊ ပိုကျဆံလညျးမရှိဘူးဆိုတော့ အကိုကလညျး ဒီ Telecomm နဲ့ လုံးဝမသိတဲ့ လူတဈယောကျဖွဈပမေယျ့ အမတို့က ဒုက်ခတှရေောကျ၊ ဆငျးရဲနတေဲ့အခြိနျမှာ ဒီ ဖုနျးကဒျလေးတှကေို သူမြားဆီကနေ တဈဆငျ့ယူရောငျးကွညျ့ရငျးကနေ ဒီ Telecom လုပျငနျးလေးကို စိတျပါသှားတာပါ။ အဲ့တုနျးက ပိုကျဆံကလညျး လုံးဝမရှိတော့ဘူးလေ၊ အိမျနဲ့ကလညျး ဖုနျးပွောရတယျဆိုတော့ အမကလညျး အကို့ကို ဂြီကရြငျးနဲ့ လုပျဖွဈသှားတာပါ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ ကိုယျကဘယျလောကျပွောပွော သူကလုပျမှဖွဈတာဆိုတော့ အဓိကက သူတျောလို့ပါ။”
သူတို့လငျမယားနှဈယောကျရဲ့ ယခငျကာလ အဝေးတဈနရောမှာ ငတျတဈလှညျ့၊ ပွတျတဈလှညျ့ အတူတူရုနျးကနျဖွဈခဲ့ပုံကိုလညျး အခုလို ဝမြှေပေးခဲ့ပါသေးတယျ။ “အဓိကကတော့ ကိုယျခဈြတဲ့သူနဲ့ အတူတူရှိနတောပေါ့နျော၊ ငတျငတျပွတျပွတျပေါ့။ ပွီးတော့ အမထငျတယျ၊ အသကျငယျတာကွောငျ့လညျး ဆိုငျတယျ။ အသကျငယျတဲ့အခါကတြော့ ပွောရမယျဆိုရငျ မိုကျရူးရဲဆနျတယျ ပေါ့နျော။ အခု အမ အသကျ(၃၀)ကြျောပွီ၊ ငတျမလားဆိုရငျ အငတျမခံနိုငျတော့ဘူး၊ အဲ့လိုမြိုးလေ။ အဲ့လိုမြိုး ကွောကျသှားပွီလေ။ ငယျတဲ့အခြိနျမှာကတြော့ ဘာမှမစဉျးစားဘူး။ ကိုယျခဈြတဲ့သူနဲ့လညျး ရှိနတေဲ့အခါကတြော့ ငတျလညျးနေ၊ ဘတျဈကားဆိုလညျး တဈနကေုနျ ပတျစီးတာပဲ။ မနကျနဲ့ညနဲ့ ပေါငျးစား ဆိုရငျလညျး မနကျနဲ့ညနဲ့ ပေါငျးစားတယျ။ ဘာမှမဖွဈဘူး။ ဗိုကျမဆာဘူးလား ဆိုရငျတော့ ဆာတယျ။ ဒါပမေယျ့ တဈရကျမစားရလို့လညျး မသသှေားဘူးလေ၊ အဲ့လိုနနေိုငျတာ။ အခုမြားကတြော့ မရတော့ဘူး။ အသကျကွီးသှားတော့ အားလုံးတှေးသှားပွီ။ ငယျတဲ့အခြိနျမှာကတြော့ မိုကျရူးရဲဆနျတာ ပေါ့နျော။”
သူမရဲ့ အခုလကျရှိ မိသားစုဘဝလေးနဲ့ ပတျသတျလို့လညျး စမိုငျးက အောကျပါအတိုငျး ဝမြှေလာပါတယျ။ “အမဆိုရငျ ပွညျ့ပွညျ့စုံစုံ အဖနေဲ့အမကေို ထားနိုငျနပွေီ။ ဒါပမေယျ့ အဖေ၊ အမေ မရှိဘူး။ ဒါပမေယျ့ အကို့ရဲ့မိဘတှေ ရှိသေးတယျ၊ အမရဲ့အဘှား ရှိသေးတယျပေါ့နျော။ အဘှားကိုဆိုရငျ ပွုစုနိုငျတယျ။ အမအဘှားက အခုခြိနျထိ ကနျြးကနျြးမာမာရှိနသေေးတယျ။ အဲ့တော့ ကိုယျက သူ့ကို ပွုစုနိုငျပွီးတော့ အေးအေးခမျြးခမျြးထားနိုငျတာကလညျး ကုသိုလျတဈမြိုးပဲလို့ ထငျပါတယျ။ အဲ့တော့ အဘှားကို ခဈြပေးတဲ့သူ၊ အမတို့ မိသားစုအကုနျလုံးကို ခဈြပေးတဲ့သူတှအေားလုံးကို ကြေးဇူးတငျပါတယျလို့။ အလှူတှကေိုလညျး လုပျနတေယျဆိုတာကလေ ကိုယျက နိုငျသလောကျလေးပဲ ပေါ့နျော။ အမအနနေဲ့ ဒီထကျလညျး အမြားကွီးလှူခငျြသေးတယျ။ ဒီထကျလညျး အမြားကွီး လူတှကေို ကယျတငျခငျြသေးတယျ။ နောကျထပျ အစီအစဉျတှလေညျး အမြားကွီးရှိသေးတယျ။ အဲ့တော့ အားပေးပါလို့ ပွောခငျြတယျ။ အမရဲ့ အှနျလိုငျးရုပျရှငျရုံ App လေးကိုလညျး ဒေါငျးလုပျ လုပျပွီးတော့ကွညျ့ထားကွပါ။ အဲ့ဒီ App လေးထဲကနလေူတှကေို Surprise အနနေဲ့ ဘယျလောကျထိလှူသှားမလဲဆိုတာလညျး အမြားကွီးရှိသေးတယျ။ အဲ့တာတှလေညျး လာဦးမှာမိုလို့ App လေးကို ဒေါငျးလုပျ လုပျပွီးတော့ ကွညျ့ထားကွပါ လို့ပဲ ပွောခငျြပါတယျ။”
Smile အှနျလိုငျးရုပျရှငျရုံလေးဟာဆိုရငျလညျး ခငျပှနျးဖွဈသူရဲ့ မှေးနမှေ့ာ Launch လုပျဖွဈခဲ့တာ ဖွဈပွီး မထငျမှတျထားလောကျအောငျကို လူတှကေ ကွညျ့ကွတဲ့အတှကျ စမိုငျးလျက ကြေးဇူးတငျစကားဆိုထားပါတယျ။ အခုအခြိနျကာလမှာ နယျဘကျကြေးဘကျတှမှောလညျး ရုပျရှငျရုံမရှိတဲ့အတှကျ ဒီ App လေးကို ပိုပွီးတော့ သုံးစှဲကွညျ့ရှုသူ မြားပွားနပွေီး ကိုဗဈကပျရောဂါကရြောကျလာတာဟာ (၆)လ၊ (၇)လမြှ ရှိပွီ ဖွဈတဲ့အတှကျ လူတှကေလညျး ရုပျရှငျဇာတျကားအသဈကို မြှျောနခြေိနျမှာ ဒီလို Launch လုပျပေးဖွဈတာဟာ မှနျကနျတဲ့ Timing ဖွဈတယျလို့ စမိုငျးလျက ဆိုပါတယျ။ စမိုငျးရဲ့ အှနျလိုငျးရုပျရှငျရုံ App ဟာဆိုရငျ iOS version အနနေဲ့လညျး ထှကျရှိတော့မှာဖွဈပွီး နောကျပိုငျးမှာ ဇာတျကားတှအေမြားကွီး တငျသှားဖို့ရှိတယျလို့ သိရပါတယျ။
ပရိသတျကွီးတို့ရေ ဒီအငျတာဗြူးလေးမှာတော့ ပွညျသူခဈြအနုပညာရှငျစမိုငျးလျက သူမရဲ့ ငယျစဉျအိမျထောငျရေးဘဝနဲ့ လုပျငနျးအတှအေ့ကွုံမြားကို မြှဝပေေးသှားခဲ့တာဖွဈပွီး အရငျလက သူမတို့ မိတျဆကျထားတဲ့ Smile အှနျလိုငျးရုပျရှငျရုံ App လေးကိုလညျး အားပေးကွညျ့ရှုကွပါဦးလို့ ပရိသတျအားလုံးကို တိုကျတှနျးခဲ့တာပဲ ဖွဈပါတယျ။ စမိုငျးလျရဲ့ အခုလိုဖွကွေားခကျြမြားနဲ့ ပတျသတျလို့ ပရိသတျကွီးတို့ရဲ့ အမွငျလေးတှကေိုလညျး ဝမြှေပေးခဲ့ကွပါအုံးနျော။ အခြိနျပေးပွီး ဖတျရှုပေးတဲ့အတှကျလညျး အားလုံးကို ကြေးဇူးတငျပါတယျ။